प्रदेश नम्बर दुईमा चुनावः राजपामा फुटाफुट, कांग्रेसमा कुटाकुट ! - Dainik Nepal
प्रदेश नम्बर दुईमा चुनावः राजपामा फुटाफुट, कांग्रेसमा कुटाकुट !
जम्बला लामा २०७४ भदौ २९ गते १०:०३
तराई मधेशको प्रदेश नम्बर २ मा हाल हुन गइरहेको निर्वाचनको क्रममा २०७४ भदौ २१ गते सिराहा जिल्लामा असोज २ गते स्थानीय तहको चुनावको लागि टिकट वितरण सम्बन्धमा विवाद हुँदा सत्तारुढ दल काँग्रेसमा नै कुटाकुट भयो । काँग्रेस सिराहाको कार्यालयमा नै संस्थापन पक्ष गुट र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र समूहका उपगुटबीच कुटाकुट भएको थियो । अर्थात् केन्द्रले गरेको उम्मेद्वार सिफारिस गरेको वडाध्यक्षलाई टिकट नदिएर जिल्ला सभापति रामचन्द्र यादवले आफ्नो मान्छेलाई टिकट दिन खोजेपछि गुट र उपगुट दुवै पक्ष झडप भएको खबर आएको थियो । त्यस झडपको क्रममा ८ नेता र १० जना कार्यकर्ताहरु घाइते भए । र घाइते भएको नेता कार्यकर्ताहरुलाई विभिन्न अस्पतालहरुमा भर्ना गराइयो ।
आफ्नो कार्यकर्तालाई नै सम्हाल्न नसक्ने देउवाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको पुच्छर समातेर आफ्नो पार्टीलाई पहिलो बनाउन सक्छन् ? के माओवादी कार्यकर्ताहरु पनि काँग्रेसको गुलामी हुन सक्छन् ? र काँग्रेसको कार्यकर्ताहरु पनि माओवादीको गुलामी हुन्छन् ? के यो सम्भव छ ? मात्र देउवाको र प्रचण्डको आ–आफ्नो व्यक्तिवादी घमण्डी सोचका कारणले गर्दा कार्यकर्ता र जनता नै दिक्क वाक्क हुने अवस्था आएको छ ।
वर्तमान् प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले २ नं. प्रदेशबाट आ–आफ्नो पार्टी काँग्रेस पहिलो शक्ति हुनेछ भनेर २ महिना अघिदेखि नै उद्घोष गरिसकेको अवस्था छ । तर तराई जिल्ला सिराहाबाट नै भएको प्रथम दर्घटनाको वस्तु स्थितिमा हेर्दामा काँग्रेसले २ नं. प्रदेशमा प्रथम त के भन्ने चौथो अर्थात् स्थान पनि प्राप्त गर्न नसक्ने क्षमता देखिन आएको छ भन्ने मधेशी जनसमुदायले नै महशुस गरिसकेको छ ।
आफ्नो कार्यकर्ताहरुलाई नै सम्हाल्न नसक्ने देउवाले माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डको पुच्छर समातेर आफ्नो पार्टीलाई पहिलो बनाउन सक्छ ? के माओवादी कार्यकर्ताहरु पनि काँग्रेसको गुलामी हुन सक्छ ? र काँग्रेसको कार्यकर्ताहरु पनि माओवादीको गुलामी हुन्छन् ? के यो सम्भव छ ? मात्र देउवाको र प्रचण्डाको आ-आफ्नो व्यक्तिवादी घमण्डी सोचका कारणले गर्दा कार्यकर्ता र जनाता नै दिक्क वाक्क भएको अवस्था आएको छ । अर्थात् दुधको साक्षी विरालो भनेजस्तो अथवा विरालो कहिल्यै पनि दुधको साक्षी हुन सक्दैन । उसले दुधलाई च्वाप्प पिइदिन्छ । हो यी दुई व्यक्ति यस्तै हुन् भन्ने जनविचारहरु आएको छ । जस्तो की दुधको साक्षी विरालो । यी दुई पार्टीको सभापति र अध्यक्षले कार्यकर्ताहरु र जनतालाई वलीको बोका बनाएको हो की भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुले अड्कलबाजी गरेका छन् । यी दुईजनाको पार्टी सिद्धान्तले फरक दिसाको मार्गमा हिड्ने पार्टी हुन् ।
देउवाले त्यस्तै तालमेलको सोच किन गरे त भने उनले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दाहालसँग तालमेलको चाल रुची प्रथम प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र दोस्रो आफू प्रधानमन्त्री हुने गरी कहाँको तेस्रो स्थानमा भएको माओवादी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउने चतुराई चाल र जालमा पारी एमाले सरकारलाई अल्पमतमा पारेको त होइन ? यी दुई व्यक्तिले । यी दुई व्यक्तिले नत राष्ट्रहितको काम गर्छ नत जनहितको नै । यिनी दुईले मात्र भ्रष्टवादी कर्मचारी र प्रहरी संगठन विभिन्न मन्त्रालय र स्वास्थ्य शिक्षा, न्यायलयलाई नै समाप्त पार्ने उद्देश्यभन्दा केही पनि गर्नसक्ने शक्ति नै छ्रैन् । कारण यी दुई जनालाई जनताले चुनेर पठाएको प्रधानमन्त्री भएको भए यस्तो अव्यवहारिक कार्य गर्दैन थिइन् ।
यी दुई जनाले जब चाहियो तब, प्रधानमन्त्री अदलबदल र तालमेल गर्ने मनस्थितिमा गज्रिरहेका छन् । अझै पनि प्रचण्ड दाहाल भन्दैछन् म र शेरबहादुर देउवा दीर्घकालिन सम्मको तालमेल गर्ने योजना छ । यो कस्तो विडम्बनाको समय हो । प्रचण्डले सधैभरी देउवाजस्तो मित्र भइरहेको हालपनि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने मनस्थिति नै भएको भन्ने जनसमुदायलाई महशुस भएको छ ।
सोच विचार गरेर बोल्ने की ?
अध्यक्ष प्रचण्डले भदौ २४ गते शनिबार रिपोटर्स क्लव नेपाल बारा जिल्ला शाखाले कलैयामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै भने एमालेलाई मधेशी जनताले मत दिन नहुने । अर्थात् एमालेले मधेशमा मत माग्ने अधिकार नैतिक धरातल गुमाइसकेको र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको कारण मधेशका जनता एमालेप्रति रुष्ट रहेको भनि मधेशको जनतालाई उक्साए । प्रचण्डले यस्तो बोलीराख्दा मधेशी जनताले नै उनलाई भन्दै थियो की, माओवादी अध्यक्ष के भन्दै छौं ? उनी आफै मधेश विरोधी छन् । उनकै बोद्धलको ठेगाना छैन । कहिले भन्छन्– संविधान विषय टुंगिसकेको छ, त्यो विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवाले किन भारतमा गएर मोदीको अगाडि घुँडाटेकी मैले फेरी पनि संविधान संशोधन दुई तिहाई पुर्याई पास गराउँछु भन्छ ? अनि मधेशमा आउँछ र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका टाउकोमा दोष थुपार्छ ? के हो प्रचण्डको चाल बुझ्नै गाह्रो भएको छ भनि मधेशी समुदायले नै गुनासो गर्छन् ।
माओवादी अध्यक्ष महोदयले हड्डी नभएको जिब्रोले बोल्दा अलि बिचार र ख्याल गरी शब्द प्रयोग गरेको भए उनको मधेशबाट नै अपमान हुने थिएन । झन् सम्मान हुन्थ्यो । भन्ने मधेशी विष्लेषकहरुको विचार आएको छ । यस्तो प्रतिकृया किन आयो त भने प्रचण्ड दाहालले विहान बोलेको शब्द बेलुकी साँझमा विर्सने बानी भएको कारणले नै उनको पार्टी सधै निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा नै रहने छन् भन्ने मधेशी जनविचार आएको छ । अतः दाहालजीले सधै आफूमात्र राजनेता संझिन्छन् र अरु त अरु आफ्नै पार्टीको कुनै पनि नेताहरुलाई दाहालजीले रुचाउँदैनन् । मात्र आफू मेघ गर्जेजस्तो गर्जिन्छन् । त्यसैको परिणाम अव, प्रदेश २ को निर्वाचनमा पनि अलि बढी पाउने मतलाई पनि उनको बोलीले गर्दा घटेको अनुमान मधेशी जनताबाट नै सुन्नमा आएको छ । अब पनि उनले १० वर्षे जनयुद्ध कालको स्वाभाव ढंगबाट हिड्ने र बोल्ने हो भने माओवादीको नामोनिसाना नै समाप्त हुनेछ भन्ने जनआँकलन आएको छ । यसकारण अध्यक्ष दाहालले सोच र विचार नै नगरी प्याच्च गरेर बोल्यो भने यस्तो हालत अर्थात् आफ्नै मुखले गर्दा पत्रकार सम्मेलन बारामा एमालेको विरुद्ध बोलेको कारणले नै मधेशबाट माओवादी ५ औं हुन पनि सम्भव नभएको भनि मधेशी जनसमुदायले भन्ने गरेको सुनिएको छ ।
माओवादी अध्यक्षले तीन विषय अर्थात् शरीरले कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, बचनले कस्तो भाषा बोल्नुपर्छ, मनले कस्तो किसिमको निकास चिताउनुपर्छ यी तीन विषयलाई सम्झि, ख्याल राखी अगाडि बढ्नुमा वेस होला की भन्ने जनविचार हो । र आगामी प्रदेश र संसद चुनावको लागि पनि दाहालले तार्गेट हानीसकेको घोषणा आफैले गरिसकेको छ । अतः दाहालजीले चराहरुले गूँड फेरेको जस्तो गरी उनले आफ्नो चुनावी क्षेत्र त्यसै गरी फेर्दैछन् । अर्थात् २०७० को आम चुनावमा उनलाई मधेशीसँग लभ परेको थियो । अब, २०७४ मंसिरमा हुने संसद र प्रदेश निर्वाचनमा उनलाई चितवन भरतपुरको जनतासँग लभ परेको छ ।
अतः उनको यो योजना सफल हुन सक्छ की भन्ने जनआँकलनहरु सुन्नमा आएको छ । अर्थात् शेरबहादुर देउवाको काँधमा चढी उनले छोरी रेणु दाहाललाई भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा मतपत्र च्यातेर भएपनि र काँग्रेसलाइ पनि च्यापेर भएपनि रेणुलाई जिताउन सफल भएकै हो । त्यसै कारण प्रचण्डले असारमा आँखा फुटेको गोरुले पुसमा पनि हरियो देखेजस्तो उनले शेरबहादुर देउवालाई गोरु जोताउने हिसाबले उनले चितवन भरतपुरबाट नै सांसद अर्थात् सभासद्मा चुनाव लड्ने निश्चित गरेको हुन सक्छ भन्ने भरतपुरवासीलाई महशुस भएको छ ।
आगामी असोज २ गते हुन गइरहेको स्थानीय तह चुनावमा भाग लिएको राजपामा नेता कार्यकर्ताहरु फुटको संघारमा पुगेका छन् । राजपाको ६ जना अध्यक्ष मण्डलका आ–आफ्नै तरिकाले प्रतिनिधि छनौटले गर्दा उनीहरुको पार्टीमा फुटापूmटको लहरो बढेको मधेश जनसमुदायको भनाई छ । अतः अध्यक्ष मण्डलमा पनि पैसावालालाई टिकट र हिजो आन्दोलनमा परी ज्यान गुमाउने सहिद परिवारको र कर्मठ जेहेनदार कार्यकर्तालाई भने हातमा लाग्यो (थोप्लो) शून्य । त्यस्तै, स्थिति पैदा भएपछि राजपाको नेता कार्यकर्ताहरु पार्टी परित्याग गरी अर्को पार्टीमा प्रवेश भई उनले टिकट समेत प्राप्त गरेका छन् ।
मधेसी जनतालाई धोका
राजपाले संविधान संशोधन नै नभई हामी निर्वाचनमा भाग लिदैनौं भनेको थियो । तर राजपाले काठमाडौंमा विदेशमन्त्री स्तरीय वैठकको बेलामा भारतको विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजसँगको लैनचौरको रात्रीभोजको भेटको क्रममा राजपालाई तिमीहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनु पर्नेछ नत्र सबै दोष भारतको टाउकोमा आउने भयो । त्यसकारण तिमीहरुले २०७४ असोज २ गतेको चुनावमा भाग लिन अनिवार्य छ र तिमिहरुको संशोधन विधेयक सफल होस् या फेल यो विषयलाई मैले प्रधानमन्त्री देउवालाई भनेर प्रकृयामा लैजाउ भनेको छ भनि आश्वासन दिएपछि राजपाहरु लुरुक्क परी चुनावमा भाग लिएका हुन् भनि मधेशी जनसमुदायले गुनासो गर्छन् । हामीलाई धोका भएको छ । त्यसै कारणले मधेशी जनता भन्छन् जनतालाई धोका भएको छ । राजपाको माग आन्दोलन जनताको लागि नभई भारतको मोदीको सरकार र विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजलाई चित्त बुझाउनको लागि जनतालाई आन्दोलनमा फसाई मराई मस्तीगर्ने कुरा अव हामी मधेशी जनताले बुझीसकेको छ भन्ने विचारहरु तराई मधेशमा नै व्यापक भएको सुन्नमा आएको छ ।
यस्तै नतिजा हाल देखा परिरहेको छ । भनि मधेशी सामाजिक संजालमा चलिरहेको छ । अर्थात् मधेशी जनता बाढी पीडित भई घरवास नभएर भोकमारी परी रोई रहेको बेलामा राजपाले भने आफ्नो कार्यकर्ताहरुलाई नोटको विटो बुक दिएर खसी बोका काटेर भोज भतेर गरिरहेको समाचारहरु पत्रिका र फेसबुकहरुमा व्यापक आएको छ । के यो राजपालाई आफ्नो मधेशको जनतलाई बाढीले बगाएर कतिले ज्यान गुमाएको छ र कतिको घरबास उठिवास भएको छ त्यो राजपालाई एकीन छ की छैन । गरिव दिन दुखीहरु रातदिन भोकमरीमा परी रोई कराईरहेको थाहा हुनु पथ्र्यो तर किन भएन भन्छन् मधेशी जनसमुदायहरु ।
भर्खरमात्र २० वर्ष पछि बल्ल चुनाव आएको छ । उनीहरुले भने हामीहरुलाई एकटुक्रा मासु र चिउराको भोज खुवाएर हाम्रो भोट तान्ने काम गरिहेको छ । हिजोको दिनमा बाढीले घरहरु डुबानमा परेको थियो त्यतिखेर उनीहरु राजपाको नेताहरु बबरमहलको सीसामहलको घरमा वसी आफ्नो दुनो सोझ्याउँदै कस्लाई टिकट दिने भन्नपट्टी ध्यान गएको थियो । तर उनीहरुका ध्यान पटक्कै हामी पीडित जनतापक्ष थिएन । जव प-यो राती घरको बुढी ताती भनेजस्तो गरी चुनाव आएपछि उनीहरुले हामीबाट भोट थुत्नको लागि खसीको एकटुक्रा मासु र एकमुठी चिउरा खुवाएर हामीलाई फकाउन आएका छन् ।
लाज पनि छैन्
मधेशी जनताहरुको भनाई यस्तो छ की, हिजोको दिनमा हामी ठूलो समस्यामा झेलेका थियौं । त्यतिखेर राजपाको नेता मण्डल कहाँ थियो । कानमा तेल हालेर सुन्दै नसुन्ने गरी बबरमहलको सिसामहल घरमा विदेशी ह्वीस्की, रम खसीको सेकुवा खाई रमाईरहेको थियो र दोषजति अर्को पार्टीको टाउको थुपाथ्र्यो । त्यो विषय हामी जनताले बुझी सकेको छ । यसको नतिजा अव आउने चुनावमा जनताले नै फैसला गर्नेछ– मधेशी जनता भन्छन् ।
देउवाको चैते मन्त्रीमण्डल गठन
शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको मुखमा आएर आचारसंहिता विपरित आफ्नो बहुमत देखाउनको लागि राप्रपा प्रजातान्त्रिक पशुपति संशेर राणाको पार्टीबाट तीन जना मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्री थप गरी ५४ जनाको जम्बो मन्त्री परिषद् गठन गरी राष्ट्रलाई नै आर्थिक भारको बोझ थपेको जनसमुदायलाई महशुस भएको छ । र प्रधानमन्त्री देउवाले थुकेको थुकलाई टिपेर खाएको जस्तो गरी आफूले नै आयल निगमको जग्गा खरिदमा संलग्न भएको व्यक्ति अर्थात् पूर्व आपुर्ति मन्त्री दीपक बोहोरालाई अवको मन्त्री परिषद्मा सामेल नगराउने भनि राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपति राणालाई सुझाव दिएको थियो ।
तर कता कताबाट उनले फेरी दीपक बोहोरालाई विज्ञान प्रविधि सुनिल थापालाई उद्योग र विक्रम पाण्डेलाई वनमन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको छ भने रेसम लामालाई उद्योग राज्यमन्त्री बनाएको छ । यो विस्तार मन्त्री परिषदमा मन्त्री ३० र राज्यमन्त्री २४ जना जम्मा ५४ जना मन्त्री र राज्यमन्त्री भएको छ । अब देउवाले यत्रो मन्त्री परिषदलाई कहाँबाट तलबभत्ता ल्याउने हो । जनताले तिरेको करले मात्र राष्ट्र चलाउन गाह्रो भईरहेको बेलामा उनले जताभावी मन्त्रालय विपरितका चैतेमन्त्री अर्थात् विज्ञानको वि पनि नबुझ्ने व्यक्ति अर्थात् आयल निगमको जग्गा खरिदसम्बन्ध भ्रष्ट्राचार गरेको संसदको सांसद समितिले कारवाही तोकेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने हिम्मत भएको प्रधानमन्त्री देउवालाई नागरिक समाजबाट धेरै धन्यबाद दिन चाहन्छु । र साथै तपाईको कार्यकालमा विभिन्न संघ संगठन अर्थात् अदालत मन्त्रालय र प्रहरी संगठन र हाल देशमा भईरहेको निर्वाचनमा पनि काँग्रेस होइन शेरबहादुर देउवा नै प्रथम होस् भनि कामना गर्दछौं ।